XASAN TURKI IYO BOQOLAAL KA MID AH CIIDAMDIISA OO FADHIISAN KA SAMAYSTAY XARUNTII DAYNIILE | Toggaherer's Weblog
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoonaan karo Hogaamiyaha Islaamiga Sheekh Xasan Cabdalla Xirsi (Alturki) oo hogaamiya mid ka mid ah garabyada Islaamiyiinta, laguna naaneyso aabaha tababarka ayaa saldhig ciidan ka sameystay Xaruntii Maxamed Qanyare ee Degmada Dayniile.
Sheekh Xasan Turki oo hogaaminaya boqolaal ka tirsan Ciidamo daacad u ah oo uu kala yimid Deegaanada Jubada Hoose, gaar ahaan saldhigiisa weyn ee hoyga Tababarada Raaskambooni ayaa fariisimo ka sameystay Garoonka macmalka ee Dayniile oo aheyd ilihii dhaqaalaha iyo saldhigii Xildhibaan Maxamed Qanyare.
Wararka ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Turki ciidamada uu wato ay qeyb ka yihiin kuwo dhowaan tababar u soo idlaaday, isla markaana ka qeyb qaadanaya dagaalada Muqdisho ee hadafkooda yahay in lagu wiiqo Dowladda Federaalka.
Sheekh Xasan Turki oo ah Kuxigeenka Ururka Xisbul Islaam ayaa bilowgii dhismaha Ururka markii uu labo garab u kala jabay sheegay inuu gooni isaga taagi doono, hase yeeshee ninka ay aadka saaxibada u yihiin Sheekh Xasan Dahir uu ku qanciyay inuu ka laabto go’aankaas, isla markaana dib loo mideyn doono Ururka.
Labadan wadaad oo ku jira Liiska waxa uu Mareykanka ugu yeero Argagixisada ayaa la rumeysan yahay inay lahaayeen maskaxdii ka dambeysa aas aaska Kooxaha Islaamiyiinta haatan faracmay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dhamaan madaxda Ururka Xisbul Islaam ay hadda ku soo uruureen magaalada Muqdisho ayna shirar xasaasi ah kadib go’aano mid ah la qaadanayan madaxda Xarakada Alshabaab si ay isugu kaashadaan afganbinta Dowladda KMG ah ee Somaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa haatan la ciir ciireysa Ciidamadii ugu badnaa oo ka socda Xisbul Islaam iyo Alshabaab, kuwaasoo isaga soo kala gurmaday Gobolada dalka qaarkood oo ay gacanta ku hayaan, waxaana mowqifkooda yahay inay xukunka ka tuuraan Dowladda Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo horay xulufo ula ahaa xilligii Midowgii Maxkamadaha Islaamka.